ဦးနှောက်ဆေးထားတဲ့ ကလေးတွေ။ - ဆုငွေဖောင်ဒေးရှင်း
ပင်မစာမျက်နှာ သတင်းဘလော့ ဦးနှောက်ဆေးထားတဲ့ ကလေးတွေ။
adminaccount888 25th အောက်တိုဘာလ 2021 နောက်ဆုံးရသတင်းများ
ညစ်ညမ်းအကြောင်း သင့်ကလေးများကို မည်သို့ပြောရမည်ကို လေ့လာပါ။ ယနေ့ခေတ်ကလေးများသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နိုင်ငံသားများကဲ့သို့ ၎င်းတို့၏ 'အခွင့်အရေး' သာမဟုတ်၊ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အန္တရာယ်မရှိဟု ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ဦးနှောက်ဆေးကြောလုနီးပါးဖြစ်နေကြသည်။ ဝမ်းနည်းစရာက သူတို့မှားနေတယ်။ ကြီးကောင်ဝင်စကာလ၊ အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်ကြား လူငယ်များသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တင်းမာမှုဒဏ်ကို အခံရဆုံးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယနေ့ခေတ် ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များ၏ ပုံမှန်မဟုတ်သော အစွမ်းထက်သော လှုံ့ဆော်မှုသည် ၎င်းတို့၏ ရင်ခုန်သံပုံစံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်၊ အချို့က ၎င်းတို့တွေ့ရှိသည့်အတိုင်း၊ လိုအပ်ချက် porn နှိုးဆော်မှုဖြစ်လာသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော လူအစစ်သည် ၎င်းတို့ကို မဖွင့်နိုင်ပေ။
ကလေးများနှင့် 18 နှစ်အောက်လူငယ်များလည်းမရှိကြပါ။ မှန်သော အချို့သော ပဏ္ဍိတများက ဆိုသကဲ့သို့ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရန်။ ယင်းအစား အစိုးရများနှင့် မိဘများက ၎င်းတို့အား အန္တရာယ်ရှိသော ထုတ်ကုန်များမှ ကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ Porn သည် လုံခြုံသောထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ် သက်သေမပြနိုင်ပါ။ တကယ်တော့ ပြောင်းပြန်ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားတွေ ရှိပါတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းအတွက် ကလေးအား အပြစ်တင်ရန် သို့မဟုတ် အရှက်ခွဲရန်ဟူ၍ မဆိုလိုပါ။ လိင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး သဘာဝအတိုင်း စူးစမ်းချင်စိတ်ဖြင့် တွန်းတိုက်မိ၍ တိုက်မိလိမ့်မည်။ အင်တာနက်သည် ၎င်းတို့၏ သတင်းအချက်အလက်အတွက် ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။
မေးစရာက ဘယ်လောက်များလွန်းနေလဲ။ ဒါပဲ သင်ယူရမယ်။ သူတို့အတွက် ဘာကြောင့်ကောင်းသလဲဆိုတဲ့ စမတ်ကျတဲ့အဖြေတွေနဲ့ သင့်ဆီပြန်တွန်းပို့ဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ နည်းပညာ "ဒိုင်နိုဆော" တစ်ကောင်သာဖြစ်ပြီး သင့်မှာ သူတို့မရှိသေးတဲ့ လက်တွေ့ဘဝအတွေ့အကြုံကို သတိရပါ။
စိန်ခေါ်ခံရသည့်အခါတွင် သင်သည် အောက်ပါအငြင်းပွားမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိုပေမည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု ခေါင်းစဉ်ပေါ်ပေါက်လာသောအခါတွင် ကလေးများ၏ ဘုံထုတ်ပြန်ချက် ဆယ်ခုအတွက် တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သည်။ သင့်ကလေးက သူတို့အတွက် ဘာအကျိုးရှိမလဲဆိုတာ သင်အကောင်းဆုံးသိတယ်။ ထိုစကားဝိုင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင်ပါစေ။ ကံကောင်းပါစေ!
သူစိမ်းတွေဆီက အချိုတွေကို အခမဲ့ယူတာ ကောင်းပါတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် ယနေ့ခေတ်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် ညီမျှသည်။ ၎င်းသည် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်သော စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ သင့်အား အခမဲ့ အတုအယောင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှုဖြင့် ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ခြင်းအတွက် ညစ်ညမ်းကုမ္ပဏီသည် အဘယ်နည်း။ အဓိကအားဖြင့် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကို အခြားကုမ္ပဏီရာပေါင်းများစွာထံ ရောင်းချခြင်းမှ ကြော်ငြာဝင်ငွေဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် အခမဲ့ဖြစ်ပါက သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည် ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက် ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းများသည် အွန်လိုင်းတွင် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည့်အပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများကိုလည်း အချိန်နှင့်အမျှ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
မင်းနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ချင်တာ ငါသိတယ်။ ပျောက်မှာစိုးလို့ (FOMO) က ကလေးအများစုအတွက် ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါ။ မိသားစုနှင့် ဝေးကွာပြီး သင့်သူငယ်ချင်းများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို စတင်ရန် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိဘတစ်ဦးအနေဖြင့် ယခုအချိန်တွင် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးကို လိုချင်ပြီး သင့်သူငယ်ချင်းများသည် ဖျော်ဖြေရေးရွေးချယ်မှုများ၏ အကျိုးဆက်များကို မသိနိုင်ပါ။ တစ်ခု အီတလီလေ့လာမှု တွေ့ရှိခဲ့သည်- တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကို သုံးစွဲသည့် အထက်တန်းကျောင်းသက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ 16% သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော လိင်စိတ်ဆန္ဒနည်းပါးမှုကို ခံစားခဲ့ရသည်။ ညစ်ညမ်းမဟုတ်သော အသုံးပြုသူများ၏ 0% နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လိင်စိတ်ဆန္ဒနည်းသည်။ ကြွားလုံးထုတ်နေသော်လည်း လူတိုင်း လိင်ဆက်ဆံကြသည်မဟုတ်သကဲ့သို့ လူတိုင်းသည် အပြာကိုကြည့်ကြသည်မဟုတ်ပေ။ သင့်အတွက် ဘေးအန္တရာယ်များကို ဖန်တီးပေးသည့်အရာများကို နောက်ပိုင်းတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို မမြင်နိုင်သော်လည်း အကဲဖြတ်ရန် သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေးများသည် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းသည် ယောက်ျားပီသခြင်း၏ အမှတ်အသားဖြစ်ပြီး အရွယ်ရောက်ခြင်းသို့ ကူးပြောင်းသည့် ဓလေ့တစ်ခုဟု ထင်မြင်ကြသည်။ သို့သော် ညစ်ညမ်းသည် လိင်တံအရွယ်အစားအတွက် စိုးရိမ်မှုများနှင့်အတူ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး လူငယ်များတွင် အစားအသောက်ပုံမမှန်ခြင်းကိုပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ (ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြံပြုစာအုပ်များကို ကြည့်ပါ။ မိဘများ၏လမ်းညွှန် အပြုသဘောဆောင်သော ယောက်ျားပီသမှုကို မြှင့်တင်နည်းအတွက် အကြံပြုချက်များအတွက်။)
အင်တာနက်မှာ နေရာတိုင်းရှိလို့ ညစ်ညမ်းကြည့်တာကို တားလို့ မရဘူး၊ မတော်တဆဖြစ်ဖြစ် ရှာကြည့်ရင် တွေ့လိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေက မင်းကို ရယ်မောဖို့ ပို့ပေးလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ထူးခြားပြီး ကွဲပြားစွာ သက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည် ပိုမိုလွန်ကဲသော ပစ္စည်းသို့ တိုးမြင့်လာရန် အဆုံးမရှိ အသစ်အဆန်းနှင့် လွယ်ကူမှုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို သင်မည်မျှကြာကြာ အသုံးပြုရသည်မှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဉာဏ်စမ်းအချို့ကို စမ်းကြည့်ပါ။ ဒီမှာ သင့်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမရှိ ကြည့်ရန်။ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေ ပွင့်နေပါစေ။ မင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်တဲ့အရာတွေကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်စေဖို့ အရေးကြီးတဲ့ဘဝကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး သခင်က အဲဒါတွေကို ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
"ဒါက ကျွန်မကို အစွမ်းထက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် သင်ပေးတယ်။"
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် အခြားသူတစ်ဦး၏ နှိုးဆွမှုအတွက် သရုပ်ဆောင်များကို ကန့်ကွက်သည့်အကြောင်း အမြဲတမ်းဖြစ်သည်။ အခြားသူတစ်ဦးကို ချစ်ခြင်းအကြောင်း၊ ဘေးကင်းရေး သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမှုအကြောင်း အသုံးပြုသူများကို သင်ကြားပေးမည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်မှာ၊ ၎င်းသည် လိင်ဆက်ဆံမှုမှ လည်ပင်းညှစ်ခြင်းနှင့် ကွန်ဒုံးမပါသော လိင်ဆက်ဆံခြင်းကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ကင်းသောအလေ့အကျင့်များကို အားပေးအားမြှောက်ပြုရာ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါများ တိုးပွားလာစေသည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ တီဗီနှင့် တေးဂီတဗီဒီယိုများတွင် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများစွာရှိသည်။ ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများနှင့်အတူ၊ အားလုံးသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုများတွင် ပြုမူပုံနည်းလမ်းများကို သွယ်ဝိုက်စွာအကြံပြုပါသည်။ သင်စုပ်ယူမည့် မက်ဆေ့ချ်များကို ရွေးချယ်ပါ။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် လိင်အရသာ ပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စစ်တမ်းတစ်ခု အဆိုပါတနင်္ဂနွေ Times သတင်းစာအသက် 22 နှစ်အောက် အမျိုးသမီးများ (Gen Z) သည် BDSM နှင့် ကြမ်းတမ်းသော လိင်မှုဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများကို နှစ်သက်ကြောင်း လူငယ်များက ဆိုသည်ထက် နှစ်ဆပိုများကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လည်ပင်းညှစ်ခံရမှု များပြားလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဆက်ဆံရေးကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး သင့်အား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေမည့် သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော တစ်စုံတစ်ဦးကို ရှာဖွေရာတွင် သင့်အား ဘေးကင်းစေလိုပါသည်။ ဒီစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘလော့ဂ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လည်ပင်းညှစ်အားနဲ့ ဖျော်ရည်ဘူးကိုဖွင့်ဖို့ လိုအပ်သလောက် လည်ပင်းကို ဖိအားအနည်းငယ်ပေးရုံနဲ့4စက္ကန့်အတွင်း အမျိုးသမီးတွေ ဦးနှောက်ကို ဘယ်လိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်ဆိုတာ လေ့လာဖို့ပါ။ ညစ်ညမ်းလုပ်ငန်းသည် “လေကစားနည်း” သို့မဟုတ် “အသက်ရှုကစားခြင်း” အဖြစ် လည်ပင်းညှစ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လည်ပင်းညှစ်ခြင်းနှင့် လည်ပင်းညှစ်ခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော အလေ့အကျင့်များဖြစ်သည်။ သူတို့က ဂိမ်းတွေမဟုတ်ဘူး။ လွန်သွားပါက ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကို သင်သဘောမတူနိုင် (သို့မဟုတ် ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ၊ သင်၏သဘောတူညီချက်ကို ရုပ်သိမ်းပါ။) မင်းသေသွားနိုင်တယ်။ ငါ မင်းကို မဆုံးရှုံးချင်ဘူး။
တကယ်လား? ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်သည် အစစ်အမှန်သရုပ်ဆောင်များ၏ လိင်ဆက်ဆံမှုဗီဒီယိုများအပေါ် အခြေခံ၍ နှစ်ဘက်မြင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ ဂျပန်မန်ဂါလိုမျိုး ကာတွန်းပုံစံနဲ့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် သင့်အား အခြားသူများလိင်ဆက်ဆံသည်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် နိုးကြားတက်ကြွသူတစ်ဦးဖြစ်လာစေရန် သင်ကြားပေးသည်။ တကယ့်လက်တွဲဖော်နဲ့ တွဲလေ့လာတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ။ တစ်ဖြည်းဖြည်း ခြေလှမ်းများသည် သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်အရာကို လေ့လာနိုင်စေပါသည်။
ယောက်ျားရော မိန်းမရော ချစ်သူ နှစ်ယောက်ကြားက ဘယ်သူ့ကို ပိုကြိုက်လဲလို့ မေးတဲ့အခါ နှစ်ယောက်စလုံးက ညစ်ညမ်း ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ တစ်ယောက်က ညစ်ညမ်း မသုံးတဲ့ တစ်ယောက်က ညစ်ညမ်း မသုံးတဲ့ ချစ်သူကို ပိုသဘောကျတယ်။ ထင်ရှားသည်မှာ၊ လူများသည် porn ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားသမားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို မနှစ်သက်ကြပေ။ အဖော်၏ဦးခေါင်းတွင် ညစ်ညမ်းဇာတ်လမ်းများမပါဘဲ သင့်တွင် ပိုမိုစစ်မှန်သောချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုရနိုင်သည်ကို ၎င်းတို့က အသိအမှတ်မပြုနိုင်ပေ။ အထူးသဖြင့် ခွဲစိတ်မှု သို့မဟုတ် ဆေးဝါးဖြင့် မြှင့်တင်ထားသော ညစ်ညမ်းဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူ သင်နှင့်အတူရှိနေချိန်တွင် သင့်ချစ်သူက အခြားတစ်ယောက်အကြောင်းကို ခေါင်းထဲတွင် တွေးစေချင်ပါသလား။ အကယ်၍ ချစ်သူသည် သင့်အပေါ် အပြည့်အဝ အာရုံမစိုက်နိုင်ပါက ညစ်ညမ်းမှုကို စွန့်လွှတ်ရန် ဆန္ဒမရှိပါက ချစ်သူပြောင်းရန် စဉ်းစားပါ။ ရှိရင် ပို့ပေးပါ။ ဒီမှာ.
Porn သည် ရင်းနှီးမှု၊ နှစ်လမ်းသွား ဆက်ဆံရေး သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်ကို ဖော်ဆောင်ခြင်းအကြောင်း ဘာမှ သင်ပေးသည် ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွင် ခွင့်ပြုချက်ယူထားပြီး လက်တွေ့ဘဝတွင် မည်သည့်အခါမှ ဖြစ်မလာပါ။ သင်မလုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေကို လုပ်စေချင်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် မသေချာတဲ့ အရာတွေကို လုပ်ချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို “No” လို့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ သိလား။ သင်ယူဖို့က တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါက အဓိကကျတဲ့ ဘဝကျွမ်းကျင်မှုပါ။ ညစ်ညမ်းလွှမ်းမိုးမှုရှိသော လိင်ဆက်ဆံမှုကို အရက် သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးနှင့် ပေါင်းလိုက်သောအခါ ၎င်းသည် ပို၍အရေးကြီးပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှု၊ မုဒိမ်းမှုနှင့် အခြားအကြမ်းဖက်မှု ရလဒ်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
ညစ်ညမ်း ကွန်ဒုံး ပြခဲ. ဒါပေမယ့် သင်သိတဲ့အတိုင်း သူတို့ဟာ ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကို အတားအဆီးအဖြစ် လုပ်ဆောင်ကြပြီး သန္ဓေတားဆေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဝတ်ထားတဲ့လူကို ပြောပြရင် အဲဒါကို သူတို့မသိဘဲ ဆွဲထုတ်လိုက်တာ တစ်နည်းအားဖြင့် 'ခိုးယူခြင်း' ဟာ တရားမဝင်ပါဘူး။ အဲဒါ မုဒိမ်းမှုပဲ။ သင့်ဘက်ကသာ သဘောတူညီချက်ကို ရုပ်သိမ်းလို့မရပါဘူး။ ရဲက စွဲချက်တင်နိုင်တယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျများခြင်းသည် အနာဂတ်တွင် သင့်အလုပ်အကိုင် အလားအလာကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ သင်ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်မလဲဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားပါ။ အလားတူအခြေအနေမျိုးတွင် အခြားသူများကို သင့်အပေါ် မည်သို့ပြုမူစေလိုကြောင်း သင့်ကိုယ်သင်မေးပါ။
"အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်၊ ဝမ်းသာစရာပါပဲ။"
သင်မှန်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက် အော်ဂဇင်သည် သဘာဝဆုတစ်ခုမှ ဦးနှောက်အတွင်းရှိ အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများ၏ အကြီးမားဆုံးပေါက်ကွဲမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် အရက်ကဲ့သို့သော အတုအယောင်ဆုလာဘ်များသည် များများစားစား ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် 'အလွန်အကျွံ' ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကို ရရှိနိုင်သည် ။ အလွန်အကျွံ နှိုးဆော်ခြင်းသည် ဦးနှောက်ကို ယုတ်လျော့စေပြီး သင့်ကို ပိုမက်မောစေပါသည်။ နေ့စဥ်ပျော်ရွင်မှုများသည် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းပုံရသည်။ အပြင်းစားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကဲ့သို့သော သာမန်ထက်သာလွန်သောလှုံ့ဆော်မှုများမှ ပျော်ရွှင်မှုကို လိုအပ်စေရန် သို့မဟုတ် ဦးနှောက်ကို ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် အေးစက်ခြင်းက ပါတနာနှင့် စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ စိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းစေပြီး စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုယ်နှိုက်ကိုပင် လျော့နည်းစေပါသည်။ ၎င်းသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကမောက်ကမဖြစ်မှုများဖြစ်သည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များနှင့် လက်တွဲဖော်နှင့် အထွတ်အထိပ်ရောက်ရန် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ဒါဘယ်သူ့အတွက်မှ ပျော်စရာမရှိပါဘူး။ ဒီရေပန်းစားတာကိုကြည့်ပါ။ ဗီဒီယို ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
“ကျွန်တော်က လိင်ဆက်ဆံဖို့ ငယ်သေးတယ်ဆိုရင် ဒါက ကောင်းမွန်တဲ့ အစားထိုးမှုတစ်ခုပါပဲ။”
အမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့် လိင်ဆက်ဆံလိုခြင်းကို ရပ်တန့်စေသော သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးတွင် သင်ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် ၎င်းတို့နှင့် ပျော်ရွှင်မှုတို့ကို ရပ်တန့်စေသည့် ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ရေရှည်တွင် မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ခေတ် ညစ်ညမ်းသည် မည်သည့်အသက်အရွယ်တွင်မဆို လိင်ကိစ္စအတွက် အန္တရာယ်မရှိသော အစားထိုးပစ္စည်းမဟုတ်ပါ။ ယခင်က ညစ်ညမ်းသော မဂ္ဂဇင်းများနှင့် ရုပ်ရှင်များသည် ထိုကဲ့သို့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့နိုင်သော်လည်း ယနေ့ခေတ်တွင် ကြမ်းတမ်းသော ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို ထုတ်လွှင့်ခြင်းမှာ မတူညီပါ။ ၎င်းသည် ရင့်ကျက်ဆဲကာလတွင် သင့်ဦးနှောက်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်ပြီး ပုံသွင်းနိုင်သည်။
အများဆုံး စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ အသက် 14 နှစ်ဝန်းကျင်တွင် စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာပါသည်။ ယနေ့တွင်၊ အခြားသူတို့၏အကျိုးအမြတ်အတွက် ကြိုးကိုင်နေသည့် အလွန်အစွမ်းထက်သော မီဒီယာများက သင့်ဦးနှောက်ကို ပုံဖော်လျက်ရှိသည်။ စားသုံးသူများအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်များကို လုံလောက်စွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မရှိပါ။
လက်တွေ့ဘဝတွင် အခြားသူများနှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်ကို သင်ယူပြီး သင့်အချိန်မတိုင်မီ လိင်အားကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာရန် ကြိုးစားခြင်းထက် ကျောင်းအလုပ်အပေါ် အာရုံစိုက်ခြင်းသည် မှန်ကန်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းခြင်းကို ဖြတ်လိုက်သူများသည် ၎င်းတို့၏ စိတ်ကျန်းမာရေးသည် အလားအလာရှိသော လက်တွဲဖော်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတူ ၎င်းတို့၏ စိတ်ကျန်းမာရေး တိုးတက်လာကြောင်း မကြာခဏ အစီရင်ခံကြသည်။
" Porn က ကျွန်မရဲ့ လိင်စိတ်ကို စူးစမ်းခွင့်ပေးတယ်။"
ဖြစ်ကောင်း။ သို့သော် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည် သုံးစွဲသူအချို့၏ လိင်အရသာကို 'ပုံသဏ္ဍာန်' ပေးသည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကို သင်ပိုမိုစူးစမ်းလေလေ၊ သင်၏ဦးနှောက်ကို အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်စေသည့်အတိုင်း လွန်ကဲသော သို့မဟုတ် ထူးဆန်းသည့် ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများအထိ တိုးလာနိုင်ခြေ ပိုများလေ၊ ဆိုလိုသည်မှာ အစောပိုင်းလှုံ့ဆော်မှုအဆင့်များကို ငြီးငွေ့လာစေသည်။ ပစ္စည်းအသစ်များဖြင့် လိင်စိတ်ထကြွလာခြင်းသည် 'သင်မည်သူဖြစ်သည်' ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ အလုပ်ထွက်ပြီးသူများစွာသည် သူတို့တွင် ထူးထူးဆန်းဆန်း အရသာနှင့် အရသာများ ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း သတင်းပို့ကြသည်။ အသုံးမပြုတော့ဘဲ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျောက်ကွယ်သွားတတ်သည်။ ဦးနှောက်က ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။
မတော်တဆ၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းသည် ဆယ်ကျော်သက်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ပုံမှန်ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုးရွားဆုံး အန္တရာယ်များကို ဖန်တီးပေးသည့် တိုးမြင့်လာနိုင်သည့် အလားအလာရှိသည့် ယနေ့ခေတ်တွင် ဆန်းသစ်သော ညစ်ညမ်းဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းဆိုက်များသည် ၎င်းတို့ရှေ့ဆက်သွားရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများကို အကြံပြုရန် algorithms ကိုအသုံးပြုသည်။
"ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းပုံက ကောင်းပါတယ်။"
တကယ်တော့ အဲဒါက ဘာလဲ။ “ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်း” ဟုခေါ်သည့် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ အခြားအမျိုးအစားတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ညစ်ညမ်းသရုပ်ဆောင်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောလစာနှင့် အခြေအနေများကို ကြွားဝါသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် တူညီသောအကြောင်းအရာအများစုကို ပါ၀င်ပြီး အများစုမှာ ရန်လိုသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များသည် ငွေကြေးကုန်ကျတတ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက် မည်မျှ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသနည်း။ အခပေး သူတို့ရဲ့ porn အတွက်? မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကို စတင်အသုံးပြုသူများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် ညစ်ညမ်းလာသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုလိုလားတောင့်တကြသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။
"အိမ်စာတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ ကူညီပေးတယ်။"
ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ သုတေသန “အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှု တိုးလာခြင်းကြောင့် ယောက်ျားလေးများ၏ ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည် ၆ လအကြာတွင် ကျဆင်းသွားကြောင်း ပြသခဲ့သည်။” ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ လောင်းကစား သို့မဟုတ် စျေးဝယ်ခြင်းများကဲ့သို့ အွန်လိုင်းတွင် ညစ်ညမ်းများကို လူများက လျှော့တွက်ကြသည်။ အန္တရာယ်မှာ သုံးစွဲသူတစ်ဦးကို နှိပ်နေစေရန် ဤထုတ်ကုန်များကို 'အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်' ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဟာ စွဲလမ်းစေတဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ ညစ်ညမ်းအတင်းအကျပ်အသုံးပြုမှုကို မမှန်မကန်အဖြစ် အများပြည်သူကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုတွေအဖြစ် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ချုပ်တည်းခြင်းကို လေ့ကျင့်ရန် သင်ယူခြင်းသည် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ ပိုကျန်းမာသော ကုသမှုကို ရှာပါ သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းကင်းစင်သော ကိုယ်ကိုကိုယ် နှစ်သိမ့်မှုအတွက် ရွေးချယ်ပါ။
"အဲဒါက ငါ့ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတာကို သက်သာစေတယ်။"
အွန်လိုင်း ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသည် ရေတိုအတွင်း တင်းမာမှုကို သက်သာစေနိုင်သော်လည်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သုံးစွဲသူအများအပြားတွင် စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုများ တိုးလာခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ကလေးငယ်များနှင့် လူငယ်များသည် ၎င်းတို့၏ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်ကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုဒဏ်ကို အခံရဆုံးဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည် ၎င်းတို့စားသုံးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်သော အာရုံကြောချိတ်ဆက်မှုများကို အားကောင်းစေသောကြောင့် ၎င်းတို့စားသုံးသည့်အရာကို အထူးသတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။. ယခုစားသုံးသောအရာသည် ၎င်းတို့၏ အနာဂတ်အတွက် နိုးကြားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။.
"ငါ့ကို အိပ်ဖို့ ကူညီပေးတယ်။"
ရေတိုအားသာချက်များရှိသော်လည်း၊ သင်၏စမတ်ဖုန်းကို အိပ်ရာပေါ်တွင်အသုံးပြုခြင်းသည် အလင်းရောင်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန် အထူးစခရင်ရှိလျှင်ပင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ရန် ခက်ခဲစေသည်။ ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ခြင်း မရှိခြင်းသည် စိတ်ကျန်းမာရေးကို ညံ့ဖျင်းစေပြီး ကျောင်းတွင် သင်ယူနိုင်မှုနှင့် စာမေးပွဲများဖြေဆိုနိုင်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးထွားမှုနှင့် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ကို တားဆီးနိုင်သည့်အပြင် ဖျားနာခြင်းမှ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေနိုင်သည်။
ညစ်ညမ်းသုံးစွဲမှုကို အိပ်စက်ခြင်းအကူအညီအဖြစ် သင်အသုံးပြုခြင်းက ၎င်းအပေါ်မှီခိုလာပါက အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားနိုင်သည်။ မင်း အိပ်ပျော်ဖို့ တခြားဘာက ကူညီပေးနိုင်မလဲ။ ဘာဝနာ? ဆန့်? သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကို သင့်ကျောရိုးပေါ်သို့ဆွဲတင်ကာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ပျံ့နှံ့စေရန် သင်ယူနေပါသလား။
ညဘက် အိပ်ခန်းအပြင်မှာ ဖုန်းကိုထားခဲ့လို့ရလား။ မင်းအတွက် အကောင်းဆုံးကို ငါလိုချင်တယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ အတူတူ လုပ်ဆောင်နိုင်မလား။